प्राय: हवाईजहाजको रंग किन सेतो हुन्छ ? कारण यस्तो छ « Naya Bato
प्राय: हवाईजहाजको रंग किन सेतो हुन्छ ? कारण यस्तो छ
काठमाडौं, २४ जेठ । प्राय: हवाईजहाजको रंग सेतो हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ । तर धेरैलाई थाहा छैन की किन हवाईजहाजको रंग सेतो राखिन्छ भनेर ।
खासमा हवाईजहाजमा सेतो रंग बढि मात्रामा राखिनुको विषेश कारण छ । किनकी सेतो रंगले उचाईमा जहाज उड्दा आउन सक्ने विभिन्न खराबीहरु जस्तो चर्किएको, तेल चुहिएको जस्ता समस्यालाई सहजै देखाईदिन्छ । त्यसैगरी सेतो रंगले प्रकाश परावर्तन गर्छ । त्यसै कारण ३० हजार फिट माथि उडेको जहाजभित्र पनि चिसो हुन्छ ।
त्यस्तै जहाजको झ्यालमा पनि ३ तह राखिएको हुन्छ । जहाज निकै उचाईमा उड्दा बाहिरी सिसा चर्कियो भने थप दुर्घटना नहोस् भनेर पाईलटले जहाजलाई तल झार्ने गर्छन् ।
तपाई हामी सबैले देखेका छौँ हवाईजहाजको झ्याल गोलो बनाइएको हुन्छ । यसको पनि कारण छ । खासमा झ्याल गोलो बनाइनुको कारण शिसामा बराबरी चाप होस् भनेर हो । निकै उचाईमा जहाज उडाउँदा निकै चाप बढेको हुन्छ, यदि झ्याल बर्गाकार वा आयताकार हुने हो भने समान चाप हुँदैन र चाँडो शिसा फुट्ने गर्छ ।
त्यति मात्र होइन झ्याल पनि सानो सानो राखिएको हुन्छ । सानो राखिनुको कारण पनि शिसा नफुटोस भनेर हो । शिसा कच्चा हुन्छ । प्रेशर बढि भएको खण्डमा जति ठूलो शिसा छ उत्ति नै फुट्ने सम्भावना बढि हुन्छ । तर ककपिटको शिसा भने ठूलो हुन्छ । त्यो ठूलो भएपनि निकै बलियो हुन्छ र त्यो निकै महंगो पनि हुन्छ ।
प्रबिधीको फट्को! मृत्यु पत्ता लगाउने प्रविधिको विकास गरिदै अमेरिकी वैज्ञानिक
मानवीय ज्यादतीका कारण पृथ्वीको भविष्य भयावह हुने वैज्ञानिकको चेतावनी
चीनको दाबी: एलियनसँग सम्पर्क गर्न सक्ने विश्वकै पहिलो देश बन्ने